Zvinyorwa zveshure kweApple Watch | Ndinobva mac
Kwangosara zuva rimwe chete kuti zvigadzirwa zvitsva zveApple maererano nemafoni uye Apple Watch ive pakati pedu uye nekufamba kwemaawa, kwakawanda kuburitsa kwatiri kuziva. Kunyangwe chifananidzo chakaburitswa inopfuura vhiki rapfuura umo mataigona kuona Apple Watch ine skrini inosvika kumucheto uye muviri une zvigadziriso uye mune itsva yegoridhe simbi kuperaKana, ikozvino isu tinoda kutaura nezve kumashure kwayo.
Mazuva mushure mekunge mufananidzo waburitswa, isu taigona kuziva kuti sosi kodhi yeiyo nyowani iOS beta yakasimbisa kuti resolution yechiratidziro yakakwira kupfuura yazvino.
Chizvarwa chinotevera cheApple Watch, iyo Series 4 icharatidza ceramic back cover kune ese mamodheru, kuwedzera kune EKG mashandiro. sezvakataurwa neTF International Securities muongorori Ming-Chi Kuo.
Mhando nyowani dzeApple Watch dzinenge dziine mabhezera madiki, anotsigira electrocardiography (ECG), uye ese achave akagadzirwa nemicamic backs (mamwe mamodheru parizvino akagadzirwa nezvakakomberedzwa musana). Tinotenda kuti mhando nyowani dzeApple Watch dzinokwezva vashandisi vazhinji kutsigiro yeECG. ECG mupi ndiye Osram (LED dhizaini) ...
Sezvatakatarisira, isu tatoona mufananidzo wepamutemo wechingave iri Apple Watch nyowani yakaratidza izvo zvinoita kunge chihombe zvishoma, bezels diki uye a Sarudzo yepamusoro-soro ingangoita 384 × 480
Apple ichafumura smartwatch yayo nyowani mangwana mune Keynote inonzi "Unganidza kutenderera" uye iyo ichaitirwa paSteve Jobs Theatre.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Izvi zvinogona kuve kumashure kweiyo nyowani Apple Watch Series 4